Home Wararka AKHRISO: Magacyadda 16-ka xildhibaan ee maanta lagu doortay Magaalada Boosaso
AKHRISO: Magacyadda 16-ka xildhibaan ee maanta lagu doortay Magaalada Boosaso
Doorashada 16 kursi oo kamid ah Golaha Shacabka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya maanta ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Kursigii ugu danbeeyay ee 16-aad ayaa goordhow lagu doortay Magaalada Boosaso oo ah deegaan doorashada labaad ee Puntland.
Kursiga Hop#157 ayaa loo doortay Maxamuud Axmed Aaden Geesood halka kursiga Hop#227 dib loogu doortay Cabdicasiis Maxamed Maxamuud (Qambi).
Kursiga#273 ayaa loo doortay Taliyihii hore ee Booliiska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko halka kursiga Hop#234 loo doortay Marwo Cabdi Bashiir.
Kursiga Hop#076 waxaa Cod gacan taag ah ku guulaystay Muuse Axmed Ismaciil oo helay dhamaan 101 Codadka Ergada ka dib markii ay u tanaasushay Faaduma Ibraahim Ismaaciil.
Kursiga Hop#169 waxa ku tartamay Cali Mahdi Maxamed Qalato iyo Xafso Cali Axmed waxaana 97 cod ku guulaystay Cali Mahdi Maxamed Qalato.
Kursiga Hop#083 axaa ku tartamay Maxamed Bashiir Cali iyo Aamino Maxamed Ciise waxaana ku guulaystay Maxamed Bashiir Cali ka dib markii Tartanka ay isaga hartay Aamino Maxamed Ciise.
Kursiga Hop#220 waxaa ku tartamay Musharaxiinta kala ah Cali Xaaji daahir Saleebaan iyo Axmed Burhaan Cumar. 101 Ergo ayaa dhamaan codka siiyay Cali Xaaji daahir ka dib markii uu ka haray Tartanka murrashax Axmed Burhaan.
Caynaanshe Yusuf Xuseen ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-222 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Maxamed Aadan diini ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-036oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Siciid Cali Muuse ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-027 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Sadaam Maxamuud Cabdi ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-158 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Faysal Axmed Maxamuud ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-149 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-190 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Cabdulaahi Faarax Mire ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-228 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Ismaaciil shire jaamac ayaa ku guulaystay Kursiga tirsigiisu Yahay Hop-142 oo ka mida 16 kursi ee lagu dooranaayo Magaalada Bosaaso.
Previous articleDowladda Qatar oo shaacisay inuu Farmaajo Berri tegayo magaalada Doxa iyo Kulan
Next articleRuushka oo xabad joojin ku dhawaaqay
Nin u dhashay Ingiriiska oo ay xukuntay Maxkamada G/lka Banadir
Maxkamadda Ciidamada Qalabka side Oo Sii Deysay Wariye Abuuja